ဆာလောင်သောသူမ – Grab Love Story
ဒေါ်မီမီတင့် အိပ်ရာက ထပြီး ရေချိုးခန်း ထဲကို ၀င်လိုက်တယ် ။ သွားတိုက်ရင်း ၀တ်ထားတဲ့ ည၀တ် ၀တ်ရုံကို ဖြေချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တကိုယ်လုံးကို မြင်နေရတဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးထဲမှာ အ၀တ်မဲ့ နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ နို့ကြီး နှစ်လုံးက အိကျနေ ပေမယ့် လုံးဝန်းနေဆဲဘဲ ။ နို့သီးခေါင်း နီနီလေးတွေကလည်း တပ်မက်စရာ ကောင်းတုံးဘဲ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ နေခဲ့လို့ ၀မ်းပျင်သား ကလည်း ခပ်မို့မို့လေး ရှိနေပေမယ့် ကြည့် လို့ ကောင်းဆဲဘဲ ။ ခါးက သိပ် မသေးတော့ပေမယ့် တုတ်တုတ်ကြီးလည်း မဖြစ်သေး ။ တင်ပါးကြီးတွေကတော့ စွင့်ကား ထယ်ဝါနေဆဲဘဲ ။ ပေါင်ကြားနေရာက အမွှေးတွေက တော်တော် ထူနေပြီ ။ ရေချိုးရင်း အမွှေးတွေကို ကပ်ကြေးနဲ့ ပါးပစ်လိုက်တယ်။ မကြာခင် တိုးမောင်ကို တနေရာရာမှာ လိုးခိုင်းတော့မယ် ။ ဒီအခါ သူ စောက်ဖုတ်ယက်ပေးမှာ သေချာတယ် ။ သူ စောက်ဖုတ်ယက်ရင် အနံ့အသက် ကောင်းစေဖို့ ဆပ်ပြာမွှေးမွှေးနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးကြောလိုက်တယ် ။ တိုးမောင်နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ သွား လိုးရမလဲ ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားနေတယ် ။
ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတာက ဗိုလ်တထောင် ဖက်မှာ နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း လေးလေးနွယ် ရဲ့ တိုက်ခန်းလေး ပါ ။ လေးလေးနွယ်က သဘောကောင်းတယ် ။ တယောက်ထဲ နေတဲ့ အပျိုကြီး ။ စကားလည်းနည်း မိတ်ဆွေလည်း နည်းလို့ သူ့ကို အကူအညီ တောင်းရင် ရမယ် လို့ တွေးမိတယ် ။ ပက်ဂီဘမြင့်ကတော့ အပေါင်းအသင်းများ ပြီး အာချောင်တတ်လို့ စိတ်မချဘူး ။ လေးလေးနွယ်ကို ဖုန်းလှမ်း ဆက်လိုက်တော့ လေးလေးနွယ်က “ ရတာပေါ့ မီမီရယ်….အချိန်မရွေးပါ..ဒါပေမယ့် လေ..သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်အခန်းမှာ ဘာလုပ်မလို့လဲ ဆိုတာလေးတော့ စပ်စုပါရစေ…” လို့ ရယ်ပြီး မေးလာ တယ် ။ သူက “ ကိုယ့်အိမ်က ချာတိတ် တယောက်ကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပေးမလို့ပါ…” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ လေးလေးနွယ်က “ သင် သူငယ်ချင်း…ကိုယ်ဖိရင်ဖိသာ အကောင်းဆုံး သင်ပေးလိုက်ပါ..မင်းလာရင် ကိုယ် အပြင် ထွက်ပေးမယ်…ကိုယ်လည်း တာမွေအိုးရှင်းမှာ ရှော့ပင်သွားစရာ ရှိလို့…” လို့ ပြောတယ် ။ အင်း…နေရာတော့ အိုကေသွားပြီ …။ ရေချိုးအပြီး ခါတိုင်းလို အကြာကြီး အလှထိုင် ပြင်မနေတော့ဘဲ။
ခပ်မြန်မြန်ဘဲအ၀တ်အစား ပွပွပါးပါးတွေကို ဆွဲဝတ်လိုက်ပြီး တိုက်ပေါ်ကဆင်းသွားလိုက်တယ် ။တိုက်အရှေ့ အပေါက်ဝတည့်တည့်မှာ တိုးမောင် ကားရပ်ပြီး ကားဘေးမှာ ရပ်စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ အံမယ်..ဒီကောင်လေး..အ၀တ်အစား သန့်သန့် နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေတယ် ။ ရေမိုးချိုးထားပုံရတယ် ။ “ တိုးမောင် …” “ ဗျာ..ဒေါ်လေး …” “ဗိုလ်တထောင် ဖက်ကို လိုက်ပို့ကွာ..ဒေါ်လေး သူငယ်ချင်း အိမ်ကို….” “ ဟုတ်ကဲ့…ဒေါ်လေး..” ဒေါ်မီမီတင့် မကြာခင် ဖြစ်လာတော့မှာတွေကို ကြိုတင် စိတ်ကူးယဉ် စဉ်းစား တွေးတောနေရင်း ရင်တွေ တအား ခုံလာသည် ။ဒေါ်မီမီတင့် က တိုးမောင်နဲ့ မကြာခင် လိုးဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် နိုးကြွနေပေ မယ့်တိုးမောင်ကတော့ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ အကြံအစည်ကို မသိသေး ။ စောသေးလို့ ကားပိတ်ဆို့တာတွေ မဖြစ်သေးဘူး ။ “ တိုးမောင်…” “ ဗျာ..ဒေါ်လေး …” “ မနေ့က ဟမ်ဘာဂါ ကောင်းလား….” “ ဟုတ်..အရမ်း ကောင်းတာဘဲ ဒေါ်လေး..ဟီး…တခါမှ မစားဘူးသေးဘူး..ကျေးဇူးပါ ဒေါ်လေး …” “ ဒီနေ့ မင်းကို အကောင်းစား တခု ထပ် ကျွေးအုံးမယ်ကွ..”။
ဟုတ်..ဒေါ်လေး…. ဗိုလ်တထောင်က ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း လေးလေးနွယ်ရဲ့အိမ်ကို ရောက်တော့ လေးလေးနွယ်က အပြင်ထွက်နဲ့ အ၀တ်အစားသစ်တွေနဲ အဆင်သင့် စောင့်နေပြီး…“ မီမီရေ..အေးအေးဆေးဆေး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်တိုင်းကျသာ နေကြ…ပြန်ရင်လည်း တံခါးသာ ဆွဲပိတ်ခဲ့လိုက်…” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ တိုးမောင်လည်းသက်သက်မြိုင်နဲ့ ရန်ကင်းတိုက်က သူ့သူငယ်ချင်း အိမ်ကို လိုက်သွားတာတဲ့အခါ ဖြစ်ပျက်တာနဲ့ တထပ်တည်း တူနေလို့ ဒေါ်မီမီတင့် သူနဲ့ လိုးကြဖို့ စီစဉ်ထားတာကို ရိပ်မိ သွားပါတော့တယ် ။ ကျေးဇူးရှင် ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ ဇနီးမယား ဖြစ်လို့ အိမ်မှာ နေတဲ့အချိန် ဒေါ်မီမီတင့်ကို မပြစ်မှား မိရအောင် သတိထား ခဲ့တာ..။ အခုလည်း တဏှာထန်တဲ့လူတယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ဒေါ်မီမီတင့်ကို တတ်နိုင်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်မီမီတင့်က “ တိုးမောင်….လိုက်ခဲ့…” ဆိုပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားတဲ့အခါ တိုးမောင်ရဲ့ စိတ်တွေ ဘလောင်ဆူ လှုပ်ရှားလာရပြီ ။ အိပ်ခန်းထဲကို သွားကြတဲ့အခါ သူက ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ အနောက်က လိုက်ရတော့ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်တုန်တာကို မြင်ရတာ။
သူ့စိတ်တွေ ယိမ်းယိုင်ကုန်သည် ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲဘဲ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အသိကလည်း တိုးမောင်ရဲ့ စိတ်တွေကို ဖေါက်ပြားလာစေသည် ။ အိပ်ခန်းထဲကို ရောက်တော့ ဒေါ်မီမီတင့်က တိုးမောင်ဖက်ကို လှည့်လိုက်ပြီး “ တိုးမောင်….မင်းကို ဒေါ်လေး ပြောပြ ချင်တာတွေ ရှိတယ်ကွာ..ဒါကြောင့် မင်းကို ဒီကို ခေါ်လာတာ…” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်နဲ့ သူနဲ့ အရမ်းကို နီးကပ်နေတယ် ။ “ မအိုက်ဘူးလားကွာ..မင်း အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ပါလား…” လို့ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်လို့ တိုးမောင်လည်း ၀တ်ထားတဲ့ စပို့ရှပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်က “ အင်း..မင်းလေးက တော်တော် ယောက်ျား ပီသပါလား…” လို့ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်ပြီး တိုးမောင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်လိုက်တယ် ။ တိုးမောင်လည်း ကြက်သီးတွေ ထပြီး ပေါင်ကြားက လီးလည်း ငေါက်ကနဲ ထလာရတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်က “ အောက်က ပုဆိုးကိုပါ ချွတ်လိုက်ကွာ…” လို့ လေသံလေးနဲ့ ထပ် အမိန့်ပေးတယ် ။ တိုးမောင်လည်း ချက်ချင်းဘဲ ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်တယ် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီဘဲ သူ့တကိုယ်လုံးမှာ ကျန်တော့ တယ် ။
ဖုဖေါင်း ငေါနေတဲ့ ပေါင်ကြားက အရာကြီးကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ပြီး “ မင်း မနက်က ရေ ချိုးခဲ့သေးလား…” လို့ မေးပြန်လို့..“ ဟုတ်..ချိုးပါတယ် ဒေါ်လေး..” လို့ တိုးမောင် ဖြေတယ် ။ “ မင်း အန်ဒါဝဲ ကိုပါ ချွတ်လိုက်…” လို့ ထပ်ပြောလို့ မဆိုင်းမတွ အမိန့်ကို နာခံလိုက်တယ် ။ တကိုယ်လုံး အ၀တ်မဲ့နေပြီ …။ ကိုယ်လုံးတီးကြီး ရပ်နေတဲ့ တိုးမောင်ကို ဒေါ်မီမီတင့် ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး ကြည့်နေပုံက ကျွန် ပိုင်ရှင်ခေတ်က သူဌေးတွေက ကျွန်ဝယ်တဲ့နေရာမှာ သေသေချာချာ စစ်ဆေး သုံးသပ်နေတဲ့ ပုံလိုပါဘဲ ။ လီးတန်ငေါငေါကြီးကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်မီမီတင့် တံတွေး မြိုချလိုက်တယ် ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ လီးကြီးပါလား …။ လင်ဖြစ်သူရဲ့ လီးတိုလေးနဲ့ တခြားစီဘဲ…အင်း..စောက်ဖုတ်ထဲက တအား ယားနေရပြီ…..။ “ မင်းရဲ့ ဘကြီးမြိုင်က ခါးနာတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ဒေါ်လေးကို ပစ်ထားတာ ကြာပြီကွ….ဒေါ်လေးနဲ့ မအိပ်တော့ဘူး …ဒေါ်လေးလည်း ယောက်ျား အပေါ်ကို သစ္စာမဖေါက်ချင်တာနဲ့ ကြိတ်မှိတ်ပြီး နေခဲ့တာ ကြာပါပြီကွာ…အခုတော့ ဒေါ်လေး မအောင့်အည်းနိုင်တော့ဘူး…မင်း ဒေါ်လေးကို ဆန္ဒဖြည့်ပေးပါလားဟင်..”။
ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ လက်တဖက်က တိုးမောင်ရဲ့ လီးတန်ကြီးဆီကို ရောက်လာတယ် ။ တိုးမောင်လည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး ။ ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်လုံးကို သူ လိုးခဲ့ပြီးပြီ ။ အခု သူ့ဇနီး ကို ထပ် လိုးရမယ် ဆိုရင် သူ ကမ်းကုန်နေပြီ ။ “ မသင့်တော်ဘူး ထင်တယ် ဒေါ်လေးရယ်…ဘကြီးမြိုင်က ကျနော့်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် တယောက်ပါ…ဒေါ်လေးကို ကျနော့် အဒေါ်အရင်း တယောက်လို သဘောထားခဲ့တာပါ….” တိုးမောင်ပြောနေတဲ့ အချိန် ဒေါ်မီမီတင့်က သူ့လီးတန်ကို ပွတ်သပ်နေတယ် ။ သည် အထိအတွေ့ကြောင့် တိုးမောင်ရဲ့ သွေးသားတွေ ထကြွလာတယ် ။ လီးကြီးက မတ်မတ်ထောင်လာတယ် ။ တောင်လာတယ် ။ “ တိုးမောင်…ကူညီပါကွာ..မင်း ဒေါ်လေးကို ကူညီစမ်းပါ…..” ဒေါ်မီမီတင့်က တိုးမောင်ရဲ့ လီးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင် နောက် လက်တဖက်နဲ့ တိုးမောင်ရဲ့ လက်ကို ဆွဲ ပြီး ကုတင်ဆီကို ခေါ်သွားတယ် ။ တိုးမောင်လည်း သူ့လီးကို ဆုပ်ကိုင်ခံထားရတာကြောင့် ကြက်သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထပြီး စိတ်တွေ ကြွထန်လာ တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်က တိုးမောင်ကို ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာထူထူကြီးပေါ်ကို တွန်းချလိုက်တယ် ။
ပက်လက်ကျ သွားတဲ့ တိုးမောင်လည်း အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်ပစ်နေတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ကို ငေးကြည့်နေမိတယ် ။ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်တွေက တိုးမောင်ရဲ့ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို သတိ ဆိုတဲ့ ချွန်းနဲ့ အုပ်လို့ မရတော့ဘူး ။ အထူးသဖြင့် ပေါင်ကြားက မို့ဖေါင်းနေတဲ့ အာပုံကြီးကို တွေ့လိုက်ရလို့ ။ အလတ်ကြီး ရှိသေးတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ကို လိုးဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ကြီးမား ဆူကြွနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက သူ့ကို ကိုင်ညှစ်ပါတော့..စို့ပါတော့လို့ ဖိတ်ခေါ်နေကြသလိုဘဲ ။ ကုတင်ပေါ် တက်လာတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ နို့ကြီးတလုံးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ကျန်တဲ့ တလုံးကို ပါးစပ် နဲ့ ငုံစို့လိုက်နဲ့အခါ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း အရမ်း ကျေနပ်သွားတယ် ။ မွေ့ယာကြီးပေါ် ပက်လက် အိပ်ချလိုက် တဲ့အချိန် တိုးမောင်းက ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးလှလှ နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်မီမီတင့်က “ ဘာကြည့်တာလဲ..” လို့ မေးတယ် ။ “ ဒေါ်လေး စောက်ဖုတ်က လှလွန်းလို့ပါ..” လို့ တိုးမောင်က ဖြေလိုက်ပြီး ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ မျက်နှာအပ် လိုက်ရင်း နမ်းရှုံ့ပါတော့တယ် ။
အို..တိုးမောင်..ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ …မင်း..မင်း မရွံဘူးလားဟင်….လို့ မေးပြီး တိုးမောင်ရဲ့ ခေါင်းကို တွန်းပစ် တယ် ။ သို့ပေမယ့် တိုးမောင်က ဖင်တုန်းကြီးတွေကို အတင်း ဆုပ်ညှစ်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို တအား စုတ် တအား ယက်တော့တာဘဲ ..။ “ အို..အား……အမလေး…အီး…..ဟင့်ဟင့်…….” ဒေါ်မီမီတင့် တသက် တကိုယ် မရဘူးတဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ရသွားလို့ တအား ထူးဆန်းနေတယ် ။ လင်ဖြစ်သူ တခါမှ မလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စောက်ပတ်ယက်စုတ်တာကို သည်ကောင်လေးက လုပ်ပေးလိုက်လို့ ။ တိုးမောင်ရဲ့ လျာက စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်း မွှေနောက်ပေးတာကြောင့် ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ဖင်ကြီးတွေ လှုပ်ခါပြီး တအင်းအင်းနဲ့ သဘောကျနေတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့် တယောက် သူ့ဘာဂျာကို ကြိုက်တယ် ဆိုတာကို သိရတော့ တိုးမောင်လည်း ကြိုးစားပမ်းစား မှုတ် ပေးတော့တာဘဲ ။ ဒေါ်မီမီတင့်ကို လန့်တဲ့ အရှိန်ကြောင့် စစချင်းမှာ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် ဒေါ်မီမီတင့်က“ ငါ့နို့တွေကိုလည်း ညှစ်ပေးလေ..တိုးမောင် ” လို့ ပြောလာတာကြောင့် သူ့လက်တွေလည်း ပို ရဲတင်း သွက်လက်လာတယ် ။
တင်းမာလုံးဝန်းတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လက်လှမ်းပြီး ကိုင်နယ်ပေးရင်း စောက်ဖုတ် ကို ဖိဖိ ယက်ပေးတယ် ။ “ အား..ဟင်း..ဟင်း….အင်ဟင်….ကောင်း..ကောင်းတယ်…ယက်..ယက်…..ယက်…..အမလေး….ကောင်းလိုက်တာ..” ဒေါ်မီမီတင့် စောက်ဖုတ်ယက် ခံလို့ ကောင်းလွန်းသလို စောက်ဖုတ်ထဲကလည်း လှိုက်ယားနေပြီ ။တခုခုနဲ့ ထိုး ထည့် ဖြေဖျောက်မှ ပြေပျောက်ရမယ့် အခြေအနေမှာ တိုးမောင်ရဲ့ စံချိန်မှီ လီးတန်ကြီးကိုအမြန်ထိုးသွင်းစေချင်လှပြီ ။ တိုးမောင်..တော်တော့ကွာ….ဒေါ်လေးကို လုပ်ပေးတော့…အရမ်း လိုချင်နေပြီကွာ…. လို့ တိုးမောင်ကို ပြောလိုက် ပေမယ့် တိုးမောင်က ယက်တာ အရှိန်ရနေတော့ ရုတ်တရက် ရပ်မပစ်လိုက်နိုင်ဘူး ။ စောက်ဖုတ်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဖင်စအိုပေါက် ညိုညိုလေးကိုပါ သူ့လျာနဲ့ ထိုးကလိပေးနေတယ် ။ တအား ခံချင်လွန်းနေလို့ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း တိုးမောင်ခေါင်းကို တွန်းပစ်လိုက်ပြီး…“ တော်ပြီဆို..ငါ ယားလှပြီ….မင်း လိုးပေးပါတော့ကွာ…” လို့ စိတ်မရှည်တော့သလို ပြောလိုက်တယ် ။ တိုးမောင်လည်း..“ ဒေါ်လေးကို ကောင်းစေချင်လို့ပါ…ဆောရီးဘဲ..” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်မီမီတင့်ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက် လိုက်ပါတယ် ။
ပေါင်တန်ဖြူဖြူနှစ်ချောင်းကို ဘေးကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ သူ့ လီးထိပ်ကို တေ့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ယားလွန်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီး အမြန်ဝင်ရေး စိတ်စော နေတယ်။ တိုးမောင်လည်း ဒီလောက်ယားနေတဲ့ စော်ကြီး အပီကို လိုးထည့်အုံးမယ် လို့ စိတ်ထဲ ကြုံးဝါးပြီး သူ့လီး ကို ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ အရည်တွေ ရွှဲနေတာကြောင့် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း မရှိဘဲ လီးကြီး အဖုတ်ထဲ ၀င်သွားပေမယ့် အသက်၅၀ အရွယ် အပျိုမနှစ်ယောက်ရဲ့ အမေရဲ့ စောက်ဖုတ်က တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ရှိနေတာကို သူ အံ့လည်း သြ သဘောလည်း ကျသွားရတယ် ။ ဘကြီးမြိုင်နဲ့ မလိုးတာ ကြာလို့ စောက်ဖုတ်လည်း အခုလို ကြပ်သွားပုံ ရတယ် ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုတောင်းတဲ့ အသွင်းအနုတ်လေးတွေနဲ့ စလိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့် တဟင်းဟင်းနဲ့ သဘောကျနေတယ် ။ သူ့ကို ပြန်ဖက်သိုင်းပြီး…“ အင်..အင်..ကောင်းတယ်…ရတယ်…လုပ်..လုပ်…” လို့ မျက်လုံး မှိတ်ပြီး ပြောနေတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ကို။
စချင်နောက်ချင် လာတာနဲ့“ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဒေါ်လေး…” လို့ မေးလိုက်တဲ့ အခါ ဒေါ်မီမီတင့်က “ မင်းက သိရဲ့သားနဲ့ကွာ..ငါ့ပါးစပ်က ထွက်တာကို ကြားချင်တယ်ပေါ့လေ..” လို့ မျက် စောင်းလေး ထိုးလိုက်ပြီး ပြောတယ် ။ “ ဟုတ်တယ်..ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ..” လို့ တိုးမောင်က နို့ကြီးတလုံးကို ကိုင်ဆုပ်ရင်း မေးလိုက်ပြန်တယ် ။ “ လိုးပေး..လိုးပေးဖို့ ပြောနေတာ..မင်းရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ဒေါ်လေးစောက်ပတ်ကို လိုးပေးပါလို့…” ဖြေရင်း ဒေါ်မီမီတင့်လည်း အောက်ကနေ ဖင်ကြီးတွေကို လှုပ်ခါရင်း ကော့ပေးလိုက်တယ် ။ တိုးမောင်လည်း ကံကောင်းလှစွာနဲ့ ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ အိမ်က မိန်းမတိုင်းကို လိုးခွင့်ရပြီး ဆက်တိုက် လိုးနေရလို့ “ ငါးသိုင်းများတော့ ဟင်းဟုန် ” ဆိုသလို ရိုးအီလာရတယ် ။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်မီမီတင့်နဲ့ လိုးတာက ပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ပြီး ဒေါ်မီမီတင့်က သည်အိမ်က အဓိက ပါဝါအကြီး ဆုံး လူ ဖြစ်တာကို သိလို့ သူ့ကို ခိုက်သွားကြိုက်သွားအောင် လိုးပေးရမည် လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ကျကျနန လိုး ပေးပါတော့တယ် ။ အရင်ကလောက် ကြောက်မနေတော့ဘဲ ပက်လက် တက်မှောက် လိုးပေးအပြီး ဖင်ကုန်းခိုင်း လိုက်တယ် ။
ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ချာတိတ်က ကိုယ့်ပြန်ခိုင်းနေပြီ ဆိုတာကို သိလိုက်ပေမယ့် သူက ကောင်းကောင်း လိုးပေးနေတာမို့ သူ့အလိုကို လိုက်တဲ့ အနေနဲ့ ဖင်ထောင်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ် ။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဖင်ကုန်းပြီး ခံရတာ စိတ်တွေ ပို ကြွထန်သလို ခံစားရလို့ ။ တိုးမောင် အပီကိုင် အပီကြုံးပြီ ။ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ဖင်တုန်းကြီးတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖြဲရင်း စအိုပေါက် နီညိုညို လေးကို ငုံ့ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆက်တိုက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ထည့်တယ် ။ “ အား….အား….” တဖတ်ဖတ် အသံတွေ နဲ့ ညည်းသံအော်သံတွေ ဆူညံနေတယ် ။ “ ကောင်းလားဟင်…” “ ကောင်းတယ်..လိုး…လိုး…ဆောင့်..ဆောင့်ကွာ..တအား..တအားဆောင့်ပေး…..” လိုးသူ ခံသူ အသံတူနေတယ် ။ သူအလိုးကောင်းသလို ခံနေတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ကလည်း ဖင်ကြီးတွေကို ကော့ပစ် ပြီး ခံနေတယ် ။ လီးကြီး ကြုံးဆောင့်နေတာတွေကိ ခံယူနေတယ် ။ အားကုန် ဆက်တိုက် ဆောင့်ပေးတာ သုတ်ရည်တွေ စောက်ခေါင်းထဲကို ပန်းထုတ်ပစ်မိပြီး ပြီးသွားရတယ် ။ “ ဒေါ်လေးရော ပြီးရဲ့လားဟင်…”လို့ မေးမိတော့..။
ပြီးတာမှ နှစ်ခါတောင်… လို့ မောဟိုက်တဲ့ လေသံနဲ့ ဒေါ် မီမီတင့်က ဖြေတယ် ။ တိုးမောင်တကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတယ် ။ “ မောသွားလား….” “ ဟင့်အင်း….” “ မင်း တော်တော် အားကောင်းတာဘဲ….ဟင်း….” “ ဒေါ်လေး ကြိုက်လား….” “ အင်း….ကြိုက်တယ်….” “ ဒေါ်လေး….လိုချင်တဲ့အချိန် ပြောပါ..ကျနော် လုပ်ပေးမယ်…” ဒေါ်မီမီတင့် ခေါင်းညှိမ့်ပြပါတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့် သည် ထမိန်ရင်လျားနဲ့ တိုးမောင်ကို ကျောခိုင်းပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ တစောင်းလေး လှဲလျောင်းနေသည် ။ အင်္ကျီပြန်မ၀တ်သေးပုံထောက်တော့ ငါနဲ့ နောက်တချီ နောက်တကြောင်းလောက် ထပ်ဆွဲချင်သေး တဲ့ ပုံ ရှိတယ် လို့ တိုးမောင် စိတ်ထဲမှာ တွေးနေတယ် ။ လိုတာ မရရှာတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ကို သူ ဆန္ဒဖြည့်ဆည်း ပေးချင်မိတယ် ။ ဘကြီးမြိုင်နဲ့ ဘယ်လို မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရမယ်တော့ မသိဘူး ။ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ကပ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်တယ် ။ “ ကျနော် နှိပ်ပေးရမလားဟင်…” လို့ ခပ်တိုးတိုး မေးလိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်ဆီက “ အင်း…”လို့ တိုးတိုး လေး ဖြေလိုက်သံကို သူ ကြားလိုက်ရလို့ အ၀တ်မဲ့နေတဲ့ ပုခုံးသားတွေကို သူ့လက်နဲ့ ခပ်ဖွဖွ စ နှိပ်ပေး လိုက်တယ် ။
တိုးမောင်… “ ဗျာ….” “ မင်းနဲ့ ငါ ကိစ္စ မင်း နုတ်လုံမှာလား…” “ ဟုတ်..ကျနော့်အတွက် စိတ်ချပါ …လုံပါတယ်…” “ အေး..ဟိုကောင်..စိုးမိုးကို မသိစေနဲ့နော်..ဒီကောင်က ငါ့ကို ကြံချင်နေတာ..သူက မင်းဘကြီးမြိုင် နဲ့ငါ မအိပ်ကြဘူး ဆိုတာ သိတယ်…ဟင်း..လူလည်…ဒီကောင်….” “ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး..ဂတိပေးပါတယ်…” “ အင်း….ဟုတ်ပြီလေ….အိမ်မှာတော့ မင်းနဲ့ ငါ ခပ်တန်းတန်းဘဲ နေကြမယ်..သိလား..လူတွေရှေ့…” “ ဟုတ်..ဒေါ်လေး…” သူ့လက်ဖ၀ါးက ဒေါ်မီမီတင့် ကျောပြင်တလျောက် ပွတ်သပ်ပေးနေတယ် ။ ထမိန်က နဂိုထဲက လျော့ရည်းရည်း နဲ့ ဆိုတော့ သူ ဆွဲချလိုက်ပြီး ခါးအထိ ဆက် ပွတ်ပေးနေတယ် ။ ၀င်းမွတ် ဖြူဖွေးတဲ့ အသားနဲ့ အထိအတွေ့ တွေက သူ့စိတ်တွေကို ပြန်နိုးထလာစေတော့ သူ့ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော် လည်း တင်းမာလာရပြန်ပြီ ။ ခါးကနေ အောက်ဖက် ဆက် ဆင်းတော့ စွင့်ကားဝိုင်း နေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေဆီကို သူ့လက် ရောက်သွားတယ်။ ဒေါ်မီမီတင့် သူ့အကိုင်အတွယ်တွေကို မငြင်း မတားဘူး ။ သဘောကျ ကျေနပ်နေတဲ့ပုံ ။ တင်ပါးကြီးတွေကို ပွတ်ပေးနေရာက လက်နဲ့ ဆုပ်ညှစ်လိုက်မိတယ် ။
ဟင်း….ပေါင်ကြားက ငပဲ ထန်းကနဲ ထောင်သွားတယ် ။ တင်စိုင်နှစ်လုံးရဲ့ ကြားထဲကို လက်ချောင်းတွေ ရောက် သွားတယ် ။ စအိုပေါက်တွန့်တွန့်လေးကို လက်ညှိုးနဲ့ ကလိလိုက်တော့ “ အို့..” ဆိုတဲ့ အသံလေး ထွက်လာ တယ် ။ ဆက် ပွတ်ပေးနေမိတဲ့အချိန် ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ လက်တဖက်က နောက်ပြန် လာစမ်းတယ် ။ သူ့ပေါင်တန် တွေ ကြားထဲကို စမ်းမိသွားတော့ သူ လီးတောင်နေတာ သိသွားပြီး..ဒေါ်မီမီတင့် ရယ်တယ် ။ “ ကြည့်စမ်း..မင်း ပြန်မာနေပြီ…မင်း သိပ် အားကောင်းတဲ့ ကောင်လေး…” လို့ ပြောလိုက်ရင်း သူ့ဖက်ကို လှည့် လာတယ် ။ ထမိန်က ပြေကျနေတော့ နို့ကြီး နှစ်လုံး ပေါ်နေတယ် ။ နို့ကြီးတွေကို အငမ်းမရ ကိုင်ဆုပ်လိုက် မိတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်က “ ကြိုက်လား…” လို့ ပြုံးပြီး မေးလိုက်တယ် ။ “ ကြိုက်တယ်…ဒေါ်လေး..ကျနော် စို့လို့ရမလား….” လို့ ခွင့်တောင်းသလို မေးလိုက်တော့..“ အင်း…” လို့ ဖြေတာ နဲ့ နို့ကြီးတလုံးက နို့သီးဖုလေးကို စပြီး စို့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ မျက်လုံးတွေ မှိတ်သွားတယ် ။ နို့စို့ရင်း ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်က “ ရှက်တယ်ကွာ..” ဆိုပြီး။
ပေါင်တန်တွေကို စေ့လိုက်ပြီး လက်နဲ့ကာ ဖို့ လုပ်ပေမယ့် သူက လက်တွေကို ဆွဲဖယ်လိုက်သလို ပေါင်တန်တွေကို ဘေးကို ဖြဲကားပစ်လိုက်တယ် ။ သူ့ ခေါင်း သူ့မျက်နှာကို စောက်ဖုတ်ကြီးဆီကို တိုးကပ် အပ်လိုက်ပြီး စနမ်းရှုံ့တော့ “ ဟဲ့ အို….ကဲလိုက်တာ..” လို့ ပြောသံ ကြားလိုက်ရပေမယ့် ပြုံးစိစိနဲ့ ကျေနပ်နေတဲ့ ပုံကိုတွေ့ရလို့ စောက်ဖုတ် အကွဲအတိုင်း လျာနဲ့ စုံချီ ဆန်ချီ ယက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ် ။ စောက်စိကို အပီ ကလိပေး သလို ဖင်ပေါက်ညိုညိုလေးကိုပါ လျာနဲ့ ကလိပေးလိုက်တယ် ။ သည် တချီမှာတော့ တိုးမောင်လည်း ပို ရဲတင်းလာသလို ဒေါ်မီမီတင့်ကလည်း ပို ပွင့်လင်းလာတယ် ။ ရဲလာတယ်။ တိုးမောင် ဘာဂျာကိုင်ပြီးတဲ့နောက် “ မင်းကို ဘာလုပ်ပေးစေချင်လဲ…” လို့ မေးလာတယ် ။ “ ပုလွေကိုင်ပေးမလားဟင်..” လို့ သူ အရဲစွန့်ပြီး မေးကြည့်လိုက်တယ် ။ “ အင်း..လုပ်ပေးမယ်လေ…” ဒေါ်မီမီတင့်က သူ့ကို ပက်လက် အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ လိင်ချောင်းကို ငုံ့စုတ်လိုက်တယ် ။ တိုးမောင် အဖို့ အိပ်မက် တခုလိုဘဲ ဖြစ်နေတယ် ။ သူတို့အိမ်က အရှင်သခင် ဒေါ်မီမီတင့်က သူ့ဒုတ်ကို အရင်းပိုင်းကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး။
ကျကျနန စုတ်ပေးနေလို့ ။ ဒါကြောင့် လောကမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ မရှိ..မဖြစ်သေးတာဘဲ ရှိမယ် ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယ်လေ ။ မထင်တာတွေ ဖြစ်ပျက်နေပြီ ။ လီးကို အားရပါးရ စုတ်နေတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို သူ မသိမသာ ကော့ကော့ပြီး ထိုညှောင့်မိနေတယ်။ သူ့ေ၈ွးစိနှစ်လုံးကိုလည်း ဒေါ်မီမီတင့်က ဆုပ်နယ်ကစားနေတယ် ။ တော်တော်ကြာအောင် စုတ်ပေးပြီးမှ လီးကို ပါးစပ်ကနေ ချွတ်ခွာလိုက်ပြီး..“ ကောင်းလား…” လို့ မေးတယ် ။ “ အရမ်းကောင်းတာဘဲ ဗျာ….” လို့ ဖြေလိုက်တ့ အချိန် ဒေါ်မီမီတင့်က သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခွတက်ထိုင်လိုက်တယ် ။ အိုး…အပေါ်က လုပ်မယ့်သဘော ..။ သည် ဒုတိယ တချီမှာတော့ ဖုတ်ပူမီးတိုက် မဟုတ်တော့ဘဲ အရသာခံပြီး ပုံစံ အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး လိုးကြတယ် ။ တော်တော့်ကို ရင်းနှီးသွားရပြီး အရှက်လည်း ကုန်သွားတယ် ။ စိတ်ကြိုက် လိုးဖြစ်ကြတယ်လို့ ပြောရမယ် ။ အပြန်ခရီးမှာ ကားပေါ်မှာ ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ အကို ယူအက်စ်က ဘကြီးခိုင်တို့သဘက်ခါဆို ရန်ကုန်ကို ရောက်တော့ မယ် လို့ ဒေါ်မီမီတင့်က ပြောပြတယ် ။ သူတို့ လာမယ် ဆိုပြီး တိုးမောင်တို့ လိုတာတွေ ပြင်ဆင် ထားခဲ့တာ တော်တော် ကြာနေပါပြီ ။
အိမ်ရောက်တော့ တိုးမောင် သူ့တန်းလျားကို ပြန်ရောက်ပြီး ရေချိုးဖို့ ပြင်နေခိုက် ဒေါ်သိန်းက ဘကြီးမြိုင် ခေါ်တယ် လို့ လာပြောလို့ ရင်ထဲ ထိတ်သွားတယ် ။ ..ငါနဲ့ သူ့မိန်းမ ဖြစ်တာများ သိသွားလေသလား…ဆိုပြီး စိတ်တအား ပူသွားတယ် ။ ကတုန်ကရင်နဲ့ ဘကြီးမြိုင် ရှိတဲ့ တိုက်ကြီး အပေါ်ထပ်ကို တိုးမောင် တက်ခဲ့လိုက်တယ် ။ပဲခူးမှာ တုံးက ကိုစိုးမိုးဟာ ဘကြီးမြိုင်..ဘကြီးခိုင်တို့ လင်မယား နှစ်စုံကို ဘုရားဖူး ဈေးဝယ် လိုက်ပို့ပေးရတဲ့ အချိန် ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ မိန်းမ ဒေါ်မီမီတင့်နဲ့ရော ဘကြီးခိုင်ရဲ့ မိန်းမ ဒေါ်စတယ်လာနဲ့ရော နီးနီးကပ်ကပ် လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ အချိန် ဒီကတော်ကြီး နှစ်ယောက်က အထာပေးသလိုလို ညုသလိုလို နဲ့ သူ့စိတ်တွေကို ထကြွစေခဲ့ပေမယ့် ကိုစိုးမိုးလည်း မိသွားရင် အကျင်းခံရမယ့်အပြင် မော်စကိုကိုပါ ရောက် သွားမှာမို့ စိတ်ကို ထိန်းပြီး ငြိမ်ကုပ်နေခဲ့တယ် ။ တကယ်တမ်း တီးချင်တာက မိုးမိုးခိုင်လေး ။ ဖြူဝင်း တောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးက လှလွန်းလို့ စိတ်ကူးနဲ့ အ၀တ်တွေ ချွတ်ကြည့်နေမိတယ် ။ နို့ကြိးတွေက ဘယ်လိုနေမှာ…စောက်ဖုတ်လေးက ဖေါင်းအိနေမှာ..စသဖြင့် စိတ်ကူးတွေ ယဉ်နေမိတော့။
လီးက မာကျော တောင်မတ်လာတယ် ။ ပုဆိုးပေါ်ကဘဲ လီးကို လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်မိလိုက်တယ် ။ အင်း..မိုးမိုးခိုင်ကို ဗျင်းရရင် ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း ….လို့ စိတ်နဲ့ မှန်းဆရင်း လီးကို ပွတ်တိုက် ကွင်းထု မိနေတယ် ။ မိုးမိုးခိုင်လည်း စီးကရက် သောက်ပြီးသွားလို့ တိုက်ဖက်ကို ပြန်သွားလိုက်တဲ့ အချိန် ကျောဖက်ကနေ တင်ပါးအိ အိတင်းတင်းတွေ တုန်ခါ လှုပ်သွားတာတွေကို မျက်လုံးကြီး အပြူးသားနဲ့ စိုက်ကြည့်နေမိတယ် ။ ဟင်း…ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ကြီးတွေ …အမလေး….လေးဖက်ထောက် လိုးလိုက်လို့ကတော့ အီဆိမ့်နေမှာဘဲ ။ ဒီအချိန်မှာ နော်တုလု သူ့အခန်းကို ရောက်လာတယ် ။ “ ကိုစိုးမိုး…အန်တီလှိုင်…ခေါ်တယ် …” “ ဟေ….ဘာတဲ့လဲ..ခုဘဲ ခရီးဝေးက ပြန်ရောက်တာ..ဘယ်ထွက်ကြအုံးမလို့လဲဟာ….” ကိုစိုးမိုးသည် မိုးမိုးခိုင် ဖင်တွေကို ငေးမောပြီး မှန်းပြီး ကွင်းကိုင်နေတာမို့ ရုတ်တရက် စိတ်တိုသွားတယ် ။ “ ဒါတော့ ကျမလည်း မသိဘူး…သူ့သွားမေးချည်…” လို့ နော်တုလုက မျက်စောင်းထိုးရင်း ခပ်စွာစွာ ပြန်ပြော လိုက်တာကို သူ ခံရတယ် ။ နော်တုလုကလည်း အရင်ထက် နို့ကြီးတွေ ပိုထွားလာသလိုဘဲ ။
ဒီကောင်မကို ဆွဲ လိုးပစ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ် လို့ သူ့စိတ်ရိုင်းတွေက ကြံစည်မိလိုက်တယ် ။ သို့ပေမယ့် သူ့အခန်းပေါက်ဝ မှာ ဒေါ်မီမီတင့် ကိုယ်တိုင် ရောက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကိုယ်ရှိန်သတ် လိုက်ရတယ် ။ “ စိုးမိုး….ဘာအပျင်းကြီးနေတာလဲ…ထ…..ထ….ငါ အပြင်ထွက်မလို့ …” ဒေါ်မီမီတင့်က ခပ်မာမာ ခပ်စွာစွာနဲ့ ပြောလိုက်လို့ သူ ကဗျာကယာ ထလိုက်ရတယ် ။ သူ့ပုဆိုးအောက်က ငပဲ တန်ကြီးကတော့ မတ်နေဆဲ ။ နော်တုလုလည်း တိုက်ဖက်ကို ပြန်လျှောက်သွား နေတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပလေကပ် ပုဆိုး အောက်က လတန်ချောင်းကြီး မာမတ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ သေသေချာချာ စူးစိုက် ကြည့်နေတယ် ။ “ ဟဲ့..စိုးမိုး..အဲဒါက ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း…” “ ဗျာ….ကျနော် ဘာလုပ်မိလို့လဲဟင်….” “ အံမယ်..မင်း ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ မင်း အသိဆုံးဘဲ…မင်း ပေါင်ကြားက ထောင်နေတာကို မေးနေတာ..” “ အဟီး…ဆောရီးဘဲ ဒေါ်လေး . . ကျ..ကျနော်…ကျနော် … ” “ ဟင်း..ရုပ်ကိုက …ကဲ..ကဲ..ငါ ဈေးသွားစရာ ရှိလို့..လိုက်ပို့စမ်း…” “ ဟုတ်ကဲ့…ဒေါ်လေး….” ဒေါ်မီမီတင့်သည်။
ကျောက်စိမ်းရောင် အသားပျော့ပျော့ အထက်အောက် ဆင်တူ ၀တ်ထားတယ် ။ အသားဖွေးဖွေး ဖြူသူမို့ သူဝတ်ထားတဲ့ အတ်အစားနဲ့ လိုက်ဖက် ကြည့်ကောင်းလှတယ် လို့ ကိုစိုးမိုး ထင် မိတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်နဲ့ အိမ်ကနေ ထွက်ခဲ့ရတဲ့အခါ လမ်းမပေါ် ရောက်တာနဲ့ ကိုစိုးမိုးက “ ဒေါ်လေး..ဘယ်ကို မောင်း ရမလဲ..” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ “ မင်းနဲ့ စကားပြောစရာတွေ ရှိတယ်..စိုးမိုး..တနေရာရာကို သွားပြောရအောင်…” “ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး…ဘယ်လိုနေရာကို မောင်းရမလဲဟင်…” “ ဟိုတယ် တခုခုပေါ့ကွာ…နာရီပိုင်း ငှားတဲ့ နေရာ တခုခုပေါ့..” ကိုစိုးမိုး သဘောပေါက်ပြီ ။ ရင်တွေလည်း အခုံမြန်လာသည် ။ ငါတော့ ကံကောင်းတော့မလား….လို့ တွေးမိလိုက်တယ် ။ သူက ဒီလိုနေရာတွေ သိထားသူမို့ နာရီပိုင်း ယူလို့ရတဲ့ ရွှေဂုန်တိုင်ဖက်က ဟိုတယ်တခုကို မောင်းလိုက်တယ် ။ ဒီဟိုတယ်က ကောင်းတာက ကးပေါ်က ဆင်းစရာ မလိုဘဲ ဟိုတယ် အခန်းတွေနားအထိ ကားကို မောင်းဝင်သွား လို့ရတာကြောင့် ကိုယ့်ကို လူမမြင်ဘူး ။ ကိုယ့်ကို အခန်းသော့ လာပေးတဲ့ ဟိုတယ်က ၀န်ထမ်း ကောင်လေး တယောက်နဲ့ဘဲ ဆက်ဆံရတယ် ။
ဒေါ်မီမီတင့်လည်း သဘောကျသွားတယ် ။ ဟိုတယ်ခန်းထဲကို နှစ်ယောက်သား ၀င်လိုက်ကြတာနဲ့ ကိုစိုးမိုး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားပြီး သူ့လီးက မတ်နေပြီ ။ တောင်နေပြီ ။ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ခါးသေးသေး အောက်က စွင့်ကားနေတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်မိလိုက်တယ် ။ ဟူး….ကောင်းလိုက်တာ…..။ “ စိုးမိုး…” “ ဗျာ …” “ မင်း…ပဲခူးမှာ တုံးက ဘာ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာလဲ….မင်း “ အ ”ချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား …” “ ဗျာ….ဟို…ဟို….ဟိုဒင်း….” ပဲခူးမှာတုံးက ဘကြီးမြိုင်ရဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ ခြံထဲသွားလည်ကြတဲ့ အခါ ညဖက် မှောင်မှ ပြန်ကြတော့ ခြံဝမှာ ရပ်ထား ခဲ့တဲ့ ကားဆီကို အားလုံး ပြန်လျှောက်ကြတဲ့ အချိန် အမှောင်ထဲမှာ ကိုစိုးမိုးရဲ့ အရှေ့က လျှောက်နေတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်က လက်လွှဲရင်း ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပေါင်ကြားကို ထိမိသွားတယ် ။ သူ့ငပဲတန်ကို မိမိရရကြီး စမ်းမိခဲ့တာမို့ ကိုစိုး မိုး တော်တော် တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ် ။ မတောတဆဘဲလို့ ထင်ခဲ့မိတယ် ။ အခုတော့ ဒေါ်မီမီတင့် ပြောပုံအရ တမင်တကာ လာထိကိုင်လိုက်တာ ဖြစ်မယ် ။ “ စိုးမိုး..ကဲ နုံချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့..ကဲ…မင်း ငါ့ကို သဘောမကျဘူးလား…ပြောစမ်း…ကြည့်..ငါ့ကို…”။
ဒေါ်မီမီတင့်သည် ကိုယ်ဟန်ပြမယ် တယောက်လို သူမကိုယ်ကို လှည့်ပြလိုက်တယ် ။ “ ဟုတ်..ဟုတ်….ဟို..ဟို….” “ အရူးကွက် နင်းမနေနဲ့ စိုးမိုးရယ်..လာစမ်း….” ဒေါ်မီမီတင့်က ကိုစိုးမိုးရဲ့ ပလေကပ်ပုဆိုးကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်ချပစ်လိုက်တယ် ။ “ အိုး…ဟား….” အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခံမ၀တ်တတ်တဲ့ ကိုစိုးမိုးရဲ့ အောက်ပိုင်း တခုလုံး ဗလာကျင်းသွားပြီး လီးတုတ်တုတ်ကြီး ငေါငေါကြီး ပေါ်သွားတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်က လီးတန်ကြီးကို တပ်မက်စွာနဲ့ စိုက်ကြည့်နေပြီး…“ မင်း ကုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်စမ်း..စိုးမိုး…” လို့ အမိန့်ပေးလိုက်တယ် ။ ကိုစိုးမိုးလည်း လီးကြီး ထောင်ရက်နဲ့ ကုတင်ပေါ် ထိုင်လိုက်တော့ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ကိုစိုးမိုး ဘေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ရင်း ဆတ်ကနဲ လီးကြီးကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်တယ် ။ “ အားပါး…..မင်း လီးက တော်တော် ကြီးတာဘဲ …” လို့ သဘောကျသလို ပြောလိုက်ရင်း လီးတန်ကို ပွတ်သပ် ကြည့်နေတယ် ။ ကိုစိုးမိုး ထင်ထားသလိုဘဲ သူ ကံကောင်းပြီ ။ သူဌေးကတော်ကိုတော့ သူ ၀ါးရတော့မယ် ..။ “ ငါ…ကြိုက်တယ်….မင်း တော်တော် ယောက်ျား ပီသတာဘဲ …” ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ လက်က ကိုစိုးမိုးရဲ့။
ဖွားဖက်တော်ကြီးရဲ့ ထိပ်ဖျားကနေ အရင်းပိုင်း အထိ ထိတယ် ဆိုရုံလေး ပွတ်သပ်နေတယ် ။ ကိုစိုးမိုးသည် ဒီအထိအတွေ့တွေကြောင့် စိတ်တွေ ထသထက်ထလာပြီးဖွားဖက်တော်မှာ သံချောင်းကြီးတချောင်းလို မာကျောလာပြီး မတ်မတ်ကြီး ထောင်လာတော့ ဒေါ်မီမီတင့်က သဘောကျပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ရယ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ “ စိုးမိုး..မင်း ငါ့ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ကြွကြွနေခဲ့တယ် မဟုတ်လား….ငါ သိပေမယ့် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့တာ….မင်း ငါ့ကို စိတ်မှန်းမှန်းပြီး ကွင်းထုတယ် မဟုတ်လား….” လို့ မေးလိုက်တော့ ကိုစိုးမိုးလည်း မငြင်းဘဲ “ ဟုတ်ပါတယ် ဒေါ်လေး….” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ “ မင်း ငါ့ဖင်ကြီးတွေကို အ၀တ်မပါဘဲ မြင်ဘူးလား…..” “ မ….မ…..မ….မြင်ဖူးပါဘူး….” ကိုစိုးမိုး တံတွေးကို ဂုကနဲ မြို ချလိုက်ပြီး ဖြေလိုက်တယ် ။ “ မင်း မြင်ချင်လား…..” “ ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ …..” ဒေါ်မီမီတင့်လည်း အရင်ဆုံး ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ အသား ပျော့ပျော့ ထမိန်လေးက ဟုတ်ကနဲ ကြမ်းပေါ်ကို ကွင်းလုံးပုံ ကျသွားသည် ။ ပင်တီပါးပါး အဖြူလေး ဘဲ ကျန်တဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေကို။
ကိုစိုးမိုး အငမ်းမရ ကြည့်လိုက်တယ် ။ ပေါင်ဂွဆုံနေရာက မို့ဖောင်းဖောင်း နေရာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်မိတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်က ပင်တီလေးကိုပါ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲချ ချွတ်လိုက်တယ် ။ အင်္ကျီကိုလည်း ချွတ်လိုက်တယ် ။ ဘရာစီယာအောက်က နို့ကြီး နှစ်လုံးက ဘရာစီယာရဲ့ ချုပ်နှောင်ထားတာကို အတင်း ရုန်းထွက်ချင်နေကြသလိုဘဲ ။ ဒေါ်မီမီတင့်က ဘရာစီယာ ချိတ်ကိုလည်း ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရော ဖွံ့ထွားတဲ့ နို့ကြီး တွေ ဘွားကနဲ ပေါ်လာတယ် ။ “ ဘယ်လိုလဲ….ဘာထင်သလဲ..စိုးမိုး…..” “ အရမ်းလှတာဘဲ ဒေါ်လေး…..” “ လာ..ဒို့ အချိန် သိပ်မရှိဘူးကွ..အိမ်မှာ စတယ်လာတို့ကို ထားခဲ့တာ…..” ဒေါ်မီမီတင့်က ကုတင်စောင်းမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး ပေါင်တန်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကားလိုက်တယ် ..။ “ စိုးမိုး….မင်း ငါ့ကို မှုတ်ချင်လား…..” “ ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့….”လာ…မှုတ်လေ ….“ ဟုတ်ကဲ့….” ကိုစိုးမိုး ပေါင်တန်ဖြူဖြူ နှစ်ချောင်းရဲ့ အလည်ခေါင်မှာ ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး မို့ဖေါင်းတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စ နမ်းရှုံ့ပါတော့တယ် ။ အမွှေး ရိပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက မို့အိနေသည် ။
အကွဲကြောင်းကြီးက အသား ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသူမို့ ပန်းနုရောင်လေး ။ နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေက ရဲနေပေမယ့် ပြဲဟနေတယ် ။ အတွင်းသားနီနီရဲရဲလေးတွေကို တပိုင်းတစ တွေ့နေရတယ် ။ ကိုစိုးမိုး အငမ်းမရ လျာနဲ့ ယက်ပြီ ။ သည် အချိန်အခါမျိုး ရပါစေ ဖြစ်ပါစေလို့ ကျိတ် ဆုတောင်းခဲ့တာ ကြာပြီ ။ ဒေါ်မီမီတင့်ကို စိတ်နဲ့ မှန်းပြီး ကွင်းတိုက်ခဲ့ရတာလည်း အကြိမ်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်တော့ဘူးလေ ။ ဖင်ကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး လီးတောင်ရတာလည်း နေ့တိုင်းဘဲ ။ အခုတော့ သူ့စိတ်ကြိုက် စောက် ဖုတ် ယက်ခွင့်ကို သူ ရနေပြီ ။ ပေါင်တန်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ဖြဲပြီး ဖိယက်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့် မျက်စိတွေ ပိတ်ထားပြီး ခံနေတယ် ။ “ အား…ရှီး…အင်း…အင်း……အီး… ပလပ်…….ပြတ်…ပလပ်…….ပြတ်……..။ ကိုစိုးမိုးလည်း အစိလေးကို လျာနဲ့ ထိုးကော်လိုက် စုတ်လိုက် အမျိုးမျိုး ကလိပေးနေတော့ ဒေါ်မီမီတင့် လည်း တအားကို အကြိုက်တွေ့နေတယ် ။ ဟိုတလောက လိုးဖြစ်လိုက်တဲ့ တိုးမောင် နဲ့တုံးကလိုဘဲ သဘောကျမိတယ် ..။ ဖိယက်ပေးနေတဲ့ ကိုစိုးမိုးကို “ တော်လိုက်တော့ ဒေါ်လေး မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ….” လို့ ပြောလိုက်လို့။
ကိုစိုးမိုးလည်း စောက်ဖုတ်ကနေ မျက်ျွှာ ခွာလိုက်ပြီး..“ ဘာလို့လဲ.. ဒေါ်လေး..ကျနော် မှုတ်တာ မကောင်းလို့လားဟင်…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ “ မဟုတ်ဘူး..ဒေါ်လေး လိုချင်နေပြီ …ဒေါ်လေးကို လုပ်ပေးတော့ကွာ….” လို့ ဒေါ်မီမီတင့်က ဖြေတယ် ။ ကိုစိုးမိုးလည်း ချက်ချင်းဘဲ ကုန်းထပြီး ဒေါ်မီမီတင့် အပေါ် တက်ခွပြီး သူ့လီးကြီးကို စောက် ဖုတ်ဝမှာ တေ့ပြီး သုံးလေးခါလောက် စုန်ချီ ဆန်ချီ ပွတ်တိုက်လိုက်ပြီးမှ ဖိသွင်းလိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း “ အိ ”လို့ အသံထွက်သွားပြီး ကိုစိုးမိုးကို လှမ်းဆွဲကိုင်လိုက်တယ် ။ ပြိကနဲ လီးကြီး ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို တိုးဝင်သွားပြီ ။ လုံးပတ်တုတ်တဲ့ကောင်ကြီးမို့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသား နံရံတွေကို တထစ်ထစ်နဲ့ ပွတ်ဆွဲသွားလို့ ဒေါ်မီမီတင့် တဖျင်းဖျင်းနဲ့ အရသာ ထူးသွားတယ် ။ ကိုစိုးမိုးက သူ တချိန်လုံး လိုးချင်နေခဲ့တဲ့ သူဌေးကတော် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးကို လိုးခွင့်ရပြီ ဆိုတော့ အရမ်း ပျော်သွားပြီ ။ ဖိသွင်းလိုက် ပြန်ဆုတ်လိုက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စလိုးပြီ ။ “ စိုးမိုး..နို့တွေကို ကိုင်လိုးစမ်းပါဟာ….” “ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး…” နို့ကြီး နှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်လိုက်။
ပါးစပ်နဲ့ စို့လိုက် လုပ်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိဖိ လိုးဆောင့်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း လင်ကြီး မလိုးနိုင်လို့ တအား ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေရတာမို့ အခုလိုတွေ ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ ကုန်းဖြစ်သွားရတာ ။ စိုးမိုးရဲ့ လီးကိုရော စိုးမိုး လိုးတာကိုရော သူမ ကြိုက်သွား ရပြီ ။ စိုးမိုးလည်း လှေကြီးထိုး ပက်လက် အနေအထားနဲ့ အားရအောင် လိုးအပြီး ဒေါ်မီမီတင့်၇ဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးပေါ်ကို ထမ်းတင်ပြီး လိုးပြန်တယ် ။ အရှိန်က မြန်ဆန် သွက်လက်နေပြီ။ “ အား..ရှီး…….ဆောင့်…ဆောင့်…ဆောင့်ပါ စိုးမိုးရဲ့..တအားနင်း ဆောင့်လိုက်စမ်းပါ . . . ”လို့ အားမလို အားမရ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ကိုစိုးမိုးက သူမလိုချင်တဲ့ အတိုင်း ခပ်ကြမ်း ကြမ်း ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပေးလိုက်လို့ ကျေနပ်သွားတယ် ။ “ ကောင်းတယ်…အိုး…ကောင်းတယ်…အား…အား….အား….” ကိုစိုးမိုးလည်း ဒေါ်မီမီတင့် ပြီးသွားတယ် ဆိုတာကို သိလိုက်တယ် ။ သူလည်း တအား ကောင်းသထက် ကောင်းလာလို့ ဒေါ်မီမီတင့်လည်း ပြီးသွားရော သုတ်ရည်တွေ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ စောက်ဖုတ် အ တွင်းထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း ပြီးလိုက်တယ် ။
ဘကြီးခိုင်တို့ မိသားစုကို အိမ်မှာ ထားခဲ့ရလို့ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါဘဲ လို့ ဒေါ်မီမီတင့်က ကိုစိုးမိုးကို ပြောလိုက်တယ် ။ ကိုစိုးမိုးက တကယ်တော့ နောက်ထပ် ထပ် လိုးချင်နေသေးတာ ။ ဒေါ်မီမီတင့်က “ စိုးမိုး နင် အခုလို နင်နဲ့ ငါနဲ့ ဖြစ်ကြတာကို ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက် မဖွနဲ့နော်..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အခါ “ ဟာ..စိတ်ချစမ်းပါဗျာ..ကျနော် ဘာလို့ ပြောရမှာလဲ … ဘယ်သူမှ မသိစေရဘူး..ဒေါ်လေး…” လို့ ပြန်ပြောလေသည် ။ ကိုစိုးမိုး အတွက်က အိပ်မက် လိုဘဲ ဖြစ်နေတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်ကို စိတ်ကြိုက် လိုးခွင့်ရသွားတာ တအား ကျေနပ်သွားတယ် ။ အိမ်ကို ပြန်ရောက်ခါနီး..ဒေါ်မီမီတင့်က “ ဧည့်သည်တွေ ပြန်သွားပြီးတဲ့ အခါ မင်းနဲ့ ဒေါ်လေးနဲ့ ထပ်သွားကြသေးတာပေါ့ အဲ့ ဟိုတယ်ကို…” လို့ ပြောတယ် ။ ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ကိုယ်တွေကို မျက်လုံးထဲမှာ ပြန်မြင်ယောင်မိရင်း ကိုစိုးမိုး စိတ်တွေ ထကြွလာမိရပြန်တယ် ။ ဒါကြောင့် “ ဒေါ်လေး…..ကျနော်..ထပ်လုပ်ချင်သေးတယ်ဗျာ . .ကျနော့် လီး ပြန်တောင်လာပြီ..” လို့ ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်မီမီတင့်က “ အချိန် မရှိတော့ဘူးကွယ်…..နောက်များမှာဘဲ…..” လို့ ပြော လိုက်တယ် ။ ကိုစိုးမိုးက “ ဒေါ်လေး…တအား စွဲတယ်ဗျာ..ဒေါ်လေး..ကျနော့်ကို အဆင်ပြေတဲ့အချိန် ထပ် တွေ့ခွင့်ပေးပါအုံး….” လို့ ပြောရင်း ဒေါ်မီမီတင့်ရဲ့ ပေါင်တန်တဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတော့လေသည်……… ပြီးပါပြီ။
စိတ် ထဲ ရှိ သ လို